The Ab Presents Nepal » भाग्यमानी जतिले मात्र देख्ने यो दुर्लभ जीउँदो दाहिने शंखलाई बेवास्ता नगरी दर्शन स्वरूप एक सेयर गर्नुहोस् ! जीवनमा शान्ति र खुसि मिल्नेछ!
भाग्यमानी जतिले मात्र देख्ने यो दुर्लभ जीउँदो दाहिने शंखलाई बेवास्ता नगरी दर्शन स्वरूप एक सेयर गर्नुहोस् ! जीवनमा शान्ति र खुसि मिल्नेछ!
हिन्दू धर्ममा प्रयोगरामायण, महाभारतमा शंखको महिमा प्रसस्त छ भने हाम्रो समाजमा मंगल कार्यदेखि मृत्युजन्य शोकको घडीमा समेत शंखवादनलाई महत्त्व दिइन्छ । शंख बजाउँदा त्यसको ध्वनिले विभिन्न प्रकारका रोगाणु र विषाणुलाई मार्ने वर्णन ऋग्वेदमा छ ।शंख महाभारतमा वर्णित एक राजा विराटको एक पुत्रको नाम पनि थियो।यो हिन्दु धर्ममा अति पवित्र मानिन्छ।यो धर्मको प्रतीक मानिन्छ। यो भगवान विष्णुको दायाँ माथिल्लो हातमा शोभायमान देखिन्छ। बिहान र बेलुकी आरती गर्दा शंख बजाइन्छ । पूजापाठ सुरू गर्दा र सकिने बेलामा पनि शंख बजाइन्छ । कतिपय जातिमा मुर्दालाई घाट लैजाँदा शंख बजाउने चलन छ ।